Yoshi Wada သည်အသံစကြဝuniversာကိုတီထွင်ဖန်တီးသူဖြစ်ပြီးအသက် ၇၇ နှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်
} Fluxus ၏ဖျော်ဖြေမှုအနုပညာ (နှင့်ကုန်သွယ်ရေးမှစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်) သည်ဂီတတွင်အိတ်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပိုက်များကိုပိုက်ထဲသို့ထည့်သည်။
Yoshi Wada, တေးရေးဆရာနှင့်ဂျပန်ဖွားအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းနယူးယောက်မြို့တွင်အမြစ်တွယ်နေသော Fluxus ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာလှုပ်ရှားမှု၏အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်အိမ်တွင်းတူရိယာများပေါ်တွင်အနည်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများမှာသူ၏မန်ဟက်တန်အိမ်၌မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ အသက် ၇၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
သူ၏သားနှင့်တေးဂီတပူးပေါင်းသူ Tashi Wada ကသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုသော်လည်းအကြောင်းရင်းကိုမသိရှိရသေးဟုဆိုသည်။ Yoshi Wada ရဲ့ဂီတကိုအသံမြည်ပြီးမြဲမြံသောအသံများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအသံစွမ်းဆောင်ရည်များကိုဖန်တီးပါ။ သူသည်အိန္ဒိယရိုးဂတ်စ်၊ မက်ဆီဒွန်ရိုးရာသီချင်းများဖြစ်သောဂီတအစဉ်အလာအမျိုးမျိုးမှအကြီးအကျယ်ချေးငှားခဲ့သည်iens နှင့် Scottish bagpipes - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သူ၏ဂီတဘ ၀ ကိုထောက်ပံ့နေစဉ်။
ရှေးခေတ်နည်းစနစ်တစ်ခုတွင် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သူသည်ပါးစပ်ကိုလက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ပိုက်ဖြင့်ပေ ၂၀ ကျော်ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ နာရီပေါင်းများစွာကြာသည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာဖျော်ဖြေပွဲများတွင်သူသည် Earth horn ဟုခေါ်သော alphorn ကဲ့သို့တူရိယာမှထွက်ပေါ်လာသောအလွန်ကြမ်းတမ်းသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုနားထောင်သူများကိုနှစ်မြှုပ်ခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Pulseating pipe တန်ချိန်သစ်များသည်အသစ်သောယူနစ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဖက်ရှင်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောပုံစံ။ "ဒီရလဒ်ဟာဒီနေ့ခေတ်ကြားနေရသောအနည်းငယ်မျှသာနှင့်တည်ငြိမ်သောအသံဥပမာများကိုအရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟုနယူးယောက် T မှ imes မှဂျွန်ရော့ကဲလ်ကရေးသားခဲ့သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် Wada ဖျော်ဖြေရေး ၊ မန်ဟက်တန်အောက်ပိုင်းရှိမီးဖိုချောင်တွင် "Wagner ၏" Rheingold "၏အစအ ဦး ၌ညနေကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ "
Mr. Idiosync သီချင်းဆိုWada ၏အရှိန်အဟုန်နှင့် Bagpipe အသုံးပြုမှုကို ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် free-jazz တံဆိပ်များဖြင့်ထုတ်ဝေသောအရေးကြီးသောအယ်လ်ဘမ်နှစ်ခု၏အခြေခံဖြစ်လာသည်။ တစ်ခုမှာ
“ Elephantine Crocodile ၏မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း” အချည်းနှီးသောရေကန်ထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စီမံကိန်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် Mr. Wada သည်ရေကူးကန်တွင်အိပ်ခဲ့သည်။ အခြားမူကွဲတစ်ခုဖြစ်သော "Off the Wallhref=">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>သိမ်းမြူ့(ခန္ဓာကိုယ်ရှိသတ္တဝါအားလုံး)နှင့်အတူပါလာသောပုဇွန်ပေါင်းများစွာကိုအနောက်ဘာလင်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ဘာလင်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။"ငါအလိုရှိသည်မှာ အဆုံးမဲ့အာကာသ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသူက "အသံကနေတဆင့်ဒီအကန့်အသတ်မရှိခံစားမှုမျိုးကိုဖန်တီးချင်တယ်" ဟုသူက ၁၉၈၇ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Mr. Wada သည်ရှုပ်ထွေးသောရုပ်ထုသံတပ်ဆင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ တွင် “ The Appointed Cloud”
အတွက်သူသည် Queens ရှိ Flushing Meadows Corona ပန်းခြံရှိနယူးယောက်သိပ္ပံခန်းမ၏ Great Hall တွင်ကိုယ်အင်္ဂါပိုက်များနှင့်ဂိုဏ်းများကိုချိတ်ဆွဲခဲ့သည်။ Davi ကတီထွင်ခဲ့သောကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့်လမ်းပြသည်Ray Rayna, visitors ည့်သည်များကသီချင်း၏အသံကိုပြောင်းလဲရန်ခလုတ်များကိုအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေကြသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Mr. Wada က "ကလေးငယ်တွေအများကြီးရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကခလုတ်နှိပ်ရတာအရူးပဲ။ အများကြီး။ "
Mr. Wada သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်သူ၏သား Tashi နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
RVNG Intl မှတဆင့်ဒစ်ကီဘာတိုကို
Yoshimasa Wada ကို ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ကျိုတိုတွင်ဂျပန်ရှိ Shukitchi Wada၊ ဗိသုကာနှင့် Kino Imakita တို့ဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူ၏ကလေးဘဝကိုစစ်ပြီးကာလနှစ်များကအခက်အခဲများဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။
Yoshi သည်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများရှိပြီးဒေသတွင်းဇင်ဘုရားကျောင်း၌သံmonာတော်များသီဆိုခဲ့သည်။ Sonny Rollins နှင့် Ornette Coleman တို့အကြောင်းစိတ်ထက်သန်စွာဖြင့်သူသည် jazz saxophone ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လေ့လာခဲ့သည်။ သူသည် Kyoto City Fine Arts တက္ကသိုလ်ရှိပန်းပုပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီး rဂူတာအုပ်စုနှင့် Hi-Red စင်တာများကဲ့သို့သောဂျပန်နိုင်ငံတွင် Avant-garde စုဆောင်းမှုများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
“ ဇင်ဥယျာဉ်ထဲမှာလကိုသူတစ်ညလုံးစောင့်ကြည့်နေတယ်” ဟုဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှ Mr. Wada ကတင်ပြခဲ့သည်။ Yoko Ono မှအနုပညာရှင်နှင့်ဂီတပညာရှင်များပါ ၀ င်သည်။ "ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီနောက်ငါရေချိုးပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ "
သူ့ရဲ့ BFA နဲ့ဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာနယူးယောက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ > Fluxus လှုပ်ရှားမှုသည် Mr. Wada ၏တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတွင်နေထိုင်သည်။ မကြာမီ Mr. Wada သည် Fluxus ၏မြင့်မြတ်သောအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရူးအမူးစွဲလမ်းမှုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကတ်ထူပြွန်များမှတေးဂီတများနှင့်နှာချေခြင်းဖြင့်တေးဂီတကိုပြုလုပ်သည်။ SoHo အဖြစ်လူသိများလာပြီးသူတို့ကိုအနုပညာသမဝါယမအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။တေးရေးဆရာ La Monte Young နှင့် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းကာလများတွင်အီလက်ထရောနစ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းသည်အီလက်ထရွန်နစ်ဂီတသည် La Monte Young နှင့် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းတွင် Mr. Le Young ၏စတူဒီယိုတွင်မြောက်အိန္ဒိယ၏ဂန္ထဝင်သီဆိုခြင်းကိုသင်ကြားပေးသောဂုရု Pandit Pran Nath ၏တပည့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ > "သူဟာအရာရာကိုလက်ခံဖို့အရမ်းမြင့်မားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအဆင့်မှာကြိုးစားခဲ့တယ်" လို့ Mr. Young ကမစ္စတာဝဒါနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုက်ခရိုတွန်ထိုးဖောက်မှုများနှင့်အနုစိတ်အပြုအမူများကြောင့်သူသည်စွဲမြဲစွာစံတူရိယာများနှင့်မကျေနပ်မှုများကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမစ္စတာ ၀ ဒါအား ဦး ချိုအားတီထွင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေ သို့သော်သူ၏ဂီတအကျိုးစီးပွားများမှာဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပွဲတော်တစ်ခုတွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားရိုးရာသီချင်းကိုသူကြားခဲ့ပြီးလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်
စတင်လိုက်သည်။ သူသည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်စကော့တလန် Highland အားကစားပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး bagpipe ဖြစ်နိုင်ချေကိုသဘောကျခဲ့သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းပြီးနောက် piobaireachd "ဒီဓလေ့ထုံးစံအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပြီးသူကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှာချင်တဲ့အကြောင်းအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်" ဟုသားဖြစ်သူတာရှီကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
Mr. Wada သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ရှိ Signal ပြခန်းတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်မြင့်မားသောဝိညာဉ်ရေးအဆင့်တွင်အရာရာကိုစုပ်ယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုအီလက်ထရောနစ်ဂီတတေးရေးဆရာ La Monte Young ကပြောကြားခဲ့သည်။ သွေးထွက်သံယိုသူမဟုတ်ပါ။ ”
Peter Gannushkin Mr. Wada ကသူ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ် သူသည်ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ယာယီတူရိယာများ၏ပုံသဏ္storedာန်ကိုသူတို့၏အဆောက်အ ဦး ၏မြေအောက်ခန်းတွင်သိုလှောင်ထားခဲ့သည်။မစ္စတာ Maciunas တီထွင်ခဲ့သောသူတို့ကို။ Tashi Wada ကကလေးဘဝစည်သည်သူ၏ဖခင်၏အသံတပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ကိုပြန်အမှတ်ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ တွင်စမ်းသပ်တေးရေးဆရာလည်းဖြစ်သောတာရှီဝါဒါသည်သူ့ဖခင်၏အသံသွင်းဟောင်းများကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်ကူညီခဲ့သည် > ယခု Saltern တံဆိပ် တွင်ရနိုင်သည်။ ထိုနှစ်တွင်အနုပညာကိုမြှင့်တင်ပေးသောမစ္စတာဝဒါ၏မြေကြီး ဦး ချိုအချို့ကိုထိန်းသိမ်းထားသောအမ်မလီဟာဗေးဖောင်ဒေးရှင်း သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ သူ၏ဖျော်ဖြေပွဲများကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ်မူလသမိုင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် ; ၎င်းအစား Tashi သည်တိုက်ရိုက်ဂိမ်း ကိုပြန်ဖွင့်သည်။ ဖခင်နှင့်သားသည်ပုံမှန်ဂီတပူးပေါင်းသူဖြစ်လာသည်။ Mr. Wada ၏ပထမဆုံးဇနီးမှာဘာဘရာ Stewart ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၈၅ တွင် Marilyn Bogerd နှင့်သူလက်ထပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့လက်အောက်သို့ရောက်သွားသည်။ သူ၏သားသည် ထပ်မံ၍ သူတို့၏သမီးဖြစ်သော Manon Bogerd Wada နှင့်မြေးတစ်ယောက်ကျန်ရစ်သည်။သူ၏ဖခင်သည်အနုပညာမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည့် BOMB
အတွက်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဂီတကိုဘာလင် - အနောက်ရှိစတူဒီယိုငယ်တစ်ခုတွင်လေ့ကျင့်စဉ် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်သူခံစားခဲ့ရသည့်စိတ်အာရုံချို့တဲ့မှုဆိုးကျိုးများအကြောင်းမေးခဲ့သည်။
"I wasn ' အဲဒီအချိန်တုန်းကမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေတယ် "ဟု Wada ကပြောကြားခဲ့သည်။ မလိုအပ်ပါဘူး ဒီအသံကမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ကိုအိပ်မက်မက်တဲ့ကမ္ဘာထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိပြီးငါ့ကိုနိုးကြားနေစေပါတယ်။ "
ပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါ၊ Philadelphia တွင်သံစုံတီးဝိုင်းနှင့် kimmel စင်တာတို့ပေါင်းစည်းသည်
2021-06-18 03:42:15 | ဂီတ
အင်အားစုများပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုသည် coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများမှပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။...
Streaming များပိုက်ဆံရနိုင်မလား? ဂီတသမားများသည်မျှော်လင့်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုချထားကြသည်။
2021-06-17 08:26:22 | ဂီတ
၎င်း၏ခန်းမကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်နယူးယောက် Philharmonic သည်ခရီးသွားရာသီကိုစီစဉ်နေသည်
2021-06-16 10:28:30 | ဂီတ
David Geffen Hall ကိုတည်ဆောက်နေစဉ်သံစုံတီးဝိုင်းသည် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ အထိအများစုကိုလင်ကွန်းစင်တာရှိအခြားနေရာနှစ်ခု၌သုံးစွဲလိမ့်မည်။...
Joan Armatrading သည်ပြီးပြည့်စုံသောသီချင်းကိုအမြဲရှာဖွေသည်
2021-06-16 06:48:02 | ဂီတ
အသက် ၇၀ ရောက်သော်သြဇာညောင်းသောအင်္ဂလိပ်တေးရေးဆရာသည်တစ်ကိုယ်တော်စာရေးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှသီးသန့်နေခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ကောင်းသောအရာများရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်။...
Zuckerberg ကိုမှတ်မိဖို့ပန်းရောင် Floyd: မင်းကလူမိုက်တစ်ယောက်ပဲ။ ငါတို့သီချင်းကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ
2021-06-15 23:02:04 | ဂီတ
ဒီကလေးတွေကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ။ Pink Floyd ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမှ ၁၉၇၉ အယ်လ်ဘမ်မှထုတ်ယူခဲ့သောပေ ၃၀ ရှည်သောပန်းပုဆရာ "The Teacher" ဖြစ်သည်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဝိညာဉ်ကိုစုပ်ယူသည့်ပညာပေးသည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ ကလိဗ်လန်ရှိ Rock and Roll Hall of Fame နှင့်ပြတိုက်တွင်အမြဲတမ်းပြသနေသည်။ Lisa DeJong ...
2021-06-13 10:06:05 | ဂီတ
၁၄ နှစ်ကြာပြီးနောက် Marin Alsop သည် Baltimore ဆင်ဖိုနီမှထွက်ခွာသွားချိန်တွင်ထိုလယ်ကွင်းသည်နောက်ပြန်လှည့်သွားသည်။ အဓိကအမေရိကန်သံစုံတီးဝိုင်း ၂၅ ခု၊ အမျိုးသမီးဂီတဒါရိုက်တာမရှိ။...
Lorde သည် Solar Power တစ်ခုတည်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီးမကြာမီစောင့်ဆိုင်းရမည့်နောက်အယ်လ်ဘမ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
2021-06-11 09:34:29 | ဂီတ
Lorde သည် "Solar Power" သီချင်းအသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအမည်တူအယ်လ်ဘမ်သစ်သည်လမ်းပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။...
ကစော်ဖောက်ခြင်းအတွက်ဖန်ဖိလစ်: ဂီတနှင့်ချက်ပြုတ်အပေါ်rené redzepi
2021-06-09 18:58:18 | ဂီတ
ကိုပင်ဟေဂင်၏နာမည်ကောင်းစားသောက်ဆိုင် Noma ၏စားဖိုမှူးနှင့်ပိုင်ရှင်သည်အာရုံအားလုံးကိုနိုးထစေလိုသည်။...
2021-06-08 12:39:23 | ဂီတ
ပရိသတ်များကသူ၏နက်ရှိုင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးပွဲ ဦး ထွက်အယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်လိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သူ၏ဇာတိအိုင်ယာလန်တွင်အပြေးအလွှားအောင်မြင်ခဲ့သည်။...
တေလာဆွစ်ဖ်၏ အစဉ်အမြဲ ရင်ဘတ်အဘယ်သူမျှမမှာ။ တစ် ဦး ဗီနိုင်းချိုနှင့်အတူ 1
2021-06-08 01:29:43 | ဂီတ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယ်လ်ဘမ်ရောင်းချမှုကိုရေတွက်သည့်အနေဖြင့် Billboard ဇယားညှိနှိုင်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအဆိုတော် - တေးရေးဆရာ၏ခြောက်လကြာအယ်လ်ဘမ်သည်ထိပ်ဆုံးသို့ပြန်သွားသည်။...
Bruce Springsteen သည်ဇွန်လတွင် Broadway သို့ပြန်လာမည်
2021-06-07 22:21:15 | ဂီတ
"Springsteen on Broadway" သည်ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင်စိန့်ဂျိမ်းပြဇာတ်ရုံ၌ဖွင့်လှစ်သည်။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရန်အပြည့်အ ၀ ပြသရန်လိုအပ်သည်။...
2021-06-07 22:18:16 | ဂီတ
အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာဒိုင်ယာနာဂျုံးစ်မှအမှတ်တမဲ့သီဆိုထားသော“ Song toaRefugee” သည်ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးများ၏အသံကိုဗဟိုပြုရန်ကြိုးပမ်းသည်။...
60s ရိုးရာကြယ်ပွင့်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Piper Patrick ကောင်းကင် 80 မှာသေ
2021-06-05 22:09:37 | ဂီတ
သူသည်ဂရင်းနစ်ကျေးရွာမှထွက်ပေါ်လာသောရိုးရာနိူးထမှုတွင်တေးဂီတသီချင်းများနှင့်သရော်စာကိုရောစပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် uilleann ပိုက်များကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။...
Spotify သည်သင်အတွက်သင့်အတွက် Wrapped Audio 'Birth Card' အတွေ့အကြုံကိုထုတ်ပေးသည်
2021-06-05 04:43:40 | ဂီတ
Spotify's Only You SpotifySpotify သည်နှစ်စဉ်လူကြိုက်များပြီးတစ် ဦး ချင်းအလိုက် Wrapped ဖြင့်သရဖူဆောင်းသည်သင်၏နှစ်ကိုသတ်မှတ်သောဂီတကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်။ Spotify သည်ဇွန်လအထိဆက်လက်တည်ရှိမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Only You ဟုခေါ်သောအခြားထုံးစံအချက်အချာကိုထွက်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာအသံ "မွေးဖ...
အချို့သော site ပိုင်ရှင်များသည်ဖယ်ဒရယ်အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ အခြားသူများကသူတို့သေပြီပြောသည်နေကြသည်။
2021-06-05 02:07:27 | ဂီတ
ဖက်ဒရယ်အကူအညီဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံကမ်းလှမ်းသော Shuttered Venue Operators Grant အစီအစဉ်အတွက်ပထမဆုံးလျှောက်လွှာများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။...